FORMULA FOR SUCCESS (FFS) -Hargeisa - Somali Jobs Inc FORMULA FOR SUCCESS (FFS) -Hargeisa - Somali Jobs Inc
FORMULA FOR SUCCESS (FFS) -Hargeisa
FORMULA FOR SUCCESS (FFS)
Formula for success waa company Hargeisa xaruntiisu tahay. FFS shaqadeedo waxa ay tahay in dadka doonaya in nolosooda hormar gaadhaan ayey la caawinaysaa dariiqadii uu ku gaaadi lahaa.
FFS kuma salaysna wax qabadkeedo ‘training’ ay bixiso, mana aha hab waana ah, waxay ku shaqeynaysaa hab caalimi ah oo adoonka laga isticmaalo lana barto
Miyaad doonaysaa in himilooyinkaaga aad kaadho; ma is weydiisaa waxay dadna nolosha ugu najaxaan dadna aanay ugu najixin; ma ogtahay in aad gaadhi kartid nooca nolosha aad doonayso haddii ilaahay nafta kuu daayo baryo; ma ogtahay in aanay lacagi kaa xanbikarayn himilooyinkaaga.
Waxaynu ognahay in caruurtu markay dhashaan in aanay waxba isdheerayn hadaanu ilmuhu dhalan wakhti ka yar 9 ka bilood ee caadiga ah, ama aanu xanuun ku dhalan. Suaasho hadaba waxay tahay: hadaanay waxba is dheerayn waa maxay sababaha ay nolosha gidigood ugu wada najixi la’yihiin. Xisaabta in ooguma jiraan kuwa malqacada dahabka lagu anqariyey, inkastoo iyagu ba nolasha aanay ku wada najaxin, laakiin way asturanyihiin.
Ma tacliinta ayaa door ka ciyaarta, haddii ay door ka ciyaarto ma sida loo kala tacliin badan yahaybaa? Ma noqon karto taa waayo, Richard Brandson oo school kadhacay markuu 16 jir ahaa ayaa sharikadihiisu way farabandan yiihiin eh, ayuu iminka ku mashquul yahay sidii dayax gacmeed dadka lacagta lehi dalhiis ugu tagaan dayaxa sannadka 2024. Ticket qiimihiisu waa USD 55 milion, inta aad maqnaanaysaana waa 10 casho. Bill Gates oo schoolka iskaguna isaga baxay ayaa maanta heer ka uu nolosha ka taagan yahay aynu wada ognahay.
Haddii aanay tacliinto dadka kala reebeen, miyey door ka qaadan kartaa dhaqaalaha caailadaha laga kala yimaado, taana ma noqon karto, waayo dadbadan oo maalqabeen ah ayaa caruurtoodu aanay ku wada najixin nolasha.
Hadii aad donayso inaad ka xorowdid nolol aan meela u socon, warar iyo dhibaato maalin walba taagan: Baro sidii aad u gaadhi lahayd horumar iyo nolol qurux badan. Experts ayaa ku caawinaya in aad himilooyinkaaga aad gaadho. La soo xidhiidh email kan formulaforsuccesss@gmail.com, adiguu da’daada iyo waxa aad qabto haddii aad mathalan shaqeyso.
Fiiro Gaar ah: Cid walba lama qaadanyo, waxa la daneynayaa cida ‘serious’ ka ah rabtana ficlan in ay himiliyooinkooda gaadhaan. Qofku marka uu is register gareeyo waxa uu la fadhiisan doonaa khabiir, iska ayaa dooranaya dadka fursadan ka faaiideesanaya.